Alldocube X, kiniin leh shaashad 2k ah, codka Hifi iyo Android 8.1 | Androidsis
Alldocube X, kiniin leh shaashad 2k ah, codka Hifi iyo Android 8.1
In kasta oo xaqiiqda ah in Google ay joojisay inay fiiro gaar ah u yeelato, soo saarayaasha qaar ayaa sii wadaya inay sharad ku galaan suuqa kiniiniyada. Maanta waxaan ka hadleynaa bedel ku dhow inuu suuqa soo galo. Waxaan ka hadlayaa Alldocube X, kiniin leh astaamo ay soo saarayaal badani jeclaan lahaayeen.
Alldocube X waa kiniin 10,5-inji ah oo xaddigiisu yahay 2.560 x 1.600 (2k) oo leh shaashad soo saaraha ugu wanaagsan ee shirkadda AMOLED maanta: Samsung. Shaashadda nooca AMOLED waxay na siineysaa tayo aan si dhib yar uga heli karno soo saarayaasha kale, oo ay ku jiraan kuwa waaweyn ee suuqa ku jira.
Intaas waxaa sii dheer, shaashadda AMOLED waxay awood u leedahay inay soo bandhigto tiro balaadhan oo ah muujinta iftiinkaLaga bilaabo saqda dhexe madow illaa iftiinka qorraxda. Waxay gaaraysaa heerka HDR-ka ee ah 145% abuurista hooska madow ee runta ah kaasoo 1.000 jeer ka mugdi badan midka madow ee lagu soo bandhigay shaashadda LCD.
Baaxadda ballaaran ee HDR ee ay bixiso bandhigani ayaa kudareysa qoto dheer iyo hodan ku ah sawirada, abuurista khibrad adeegsade sare. Faa'iidada kale ee tikniyoolajiyaddani na siiso ayaa ah inay na siiso culeys yar oo ka yimaada indhaha dadka isticmaala 'xaqiiqda ah inay soo saareyso 50% iftiin buluug ah oo ka yar kan caadiga ah ee LCD.
Gudaha kaniiniga Alldocube X waxaan ka helnaa noocii ugu dambeeyay ee Android oo maanta la heli karo, Android 8.1 oo ay weheliso MediaTek oo ah processor lix-geesood ah MT8176, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keydinta eMMC ah, booska aan ku balaarin karno isticmaalka kaararka xusuusta. Processor-kan ayaa noo ogolaanaya inaan ku ciyaarno filimada 4k tayo leh dhib la'aan.
Intaa waxaa sii dheer, mahadnaqa barnaamijka 'AKM', oo sidoo kale ay soo saartay shirkadda Samsung, wuxuu na siinayaa dareen nasasho leh marka aan isticmaalno dhagaha. Kiniinkan wuxuu dhexgalaa dareeraha aqoonsiga faraha kaas oo aan uga ilaalin karno helitaanka qalabka jaleecada aan loo baahnayn.
Cabirka Alldocube X waa 245 x 175 x6,9 milimitir gudahana waxaan ku aragnaa a 8.000 mAh batari si dhakhso leh u shaqeeya kaas oo aan ku isticmaali karno si xoogan qalabka a 5,5 saacadood oo aan kala go 'lahayn.
Xilligan ma hayno taariikh la sii daynayo oo la filayo. Sidoo kale ma ogin qiimaha uu ku bilaabmayo kiniinkan cajiibka ah, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aan ku ogaanno, waanu kuu soo sheegi doonaa si dhakhso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Alldocube X, kiniin leh shaashad 2k ah, codka Hifi iyo Android 8.1
waxay noqon doontaa kudhowaad 250 doolar
Ku jawaab Andres Montoya
Aadan Jaad dijo
Qiimaha kiniinkan ayaa muhiim noqon doona. noocyadu waa kuwo aad u wanaagsan oo qiimaha waa inuu ka yaraadaa $ 300.
Jawaab Adam Chad
Sida ku cad faahfaahinta la xaqiijiyay ee Alldocube X, waa kiniin aad u caato ah oo caqli badan. Waxaa la sii deyn doonaa Ogosto 8.
Alldocube X oo leh naqshad caato ah.
Ujawaab Charles Basil
Kingley rex dijo
Alldocube x kiniin waxaa lagu maalgeliyaa 200% gudaha 24 saacadood. booqo Indiegogo wixii macluumaad dheeraad ah.
Shaashad Waxqabad Sare / Super AMOLED / HiFi Sound / Naqshad Naqshad Sare leh / Android 8.1 / Furo Faraha
Jawaab Kingsley Rex
Sida loo weyddiiyo su'aalaha sheekooyinka 'Instagram': cibaaro weyn oo Instagram ah